Uhlu Lwezingcingo lwebhizinisi lase-Austria | Inombolo Yeselula | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi Lase-Austria
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi Lase-Austria
Izinombolo zefoni yase-Austria
Uhlu lwezinombolo zebhizinisi lase-Austria luhlinzeka futhi, uhlu lwefoni oluzwakalayo futhi oluphezulu. Isebenzisa uhlu lwefoni yasebhizinisi lase-Austria kanye nezidingo zesikhathi sokuhanjiswa kabusha kwezingcingo kubahlinzeki benkonzo, imininingwane yamuva yokuthumela imeyili idala netheku eliphephile kusuka kwisibopho se-TCPA sabashayeli bebhizinisi, inqobo nje lapho bengabonisa: (1) ukuthi bahlole imininingwane yangaphambilini lapho benza ucingo; futhi (2) i-database ikhombisile ukuthi le nombolo ibinganqanyelwanga, okwenza ukuthi othola ucingo azi ukuthi umthengi usengafinyelelwa kulelo nani.
Futhi thola uhlu lwabasebenzisi be-mobile abaqondiswe ku-Track inombolo yeselula, thola abangane, i-SMS yendawo, wabelane ngendawo yakho nabangane, othole kude, i-id yomshayeli oseduzane nekheli elibukhoma kulolu hlelo lokusebenza lwefoni Ucingo lwendawo Indawo Finder & I-GPS Yomshayeli we-Tracker.
Thenga uhlu lwezinombolo zefoni yase-Austria
Inani Lamarekhodi: 44500
UHLU LWEZIMALI LOKUTHENGA I-AUSTRIA
Uhlu lwefoni yebhizinisi le-AUSTRIA luhlu oluthembekile lohlu lwefoni oluvela ku-AUSTRIA. Lolu hlu lwezinombolo zefoni yebhizinisi lunesethi eqondile yabemukeli engathola kuphela lolu hlu lwebhizinisi elivumelekile futhi eliqinisekisiwe ku-AUSTRIA okufakwe kulolu hlu, indlela efanelekile futhi ebonakalayo yokuthola uhlu lwefoni lwebhizinisi elifanele.
Lokhu kwenziwa ngokufanele futhi kucwaningwe ukuba khona kwethu siqu ezimakethe ezithile eziqondiwe futhi kwenza inkampani yakho itholakale kalula kubantu noma izinkampani ezivela ezweni lase-AUSTRIA. Ngokunikezwa iqiniso lokuthi ibhizinisi lakho lidinga inombolo entsha yocingo yendawo ngayinye eqondisiwe, isidingo sokuthola izinombolo zamahhala zenqwaba kuyinto eseqhulwini. Ngakho-ke, lapho uthenga okuningana ngentengo engabizi, kokukhona izinzuzo zebhizinisi lakho.
Lolu hlu lwebhizinisi le-AUSTRIA lunohlu lwamarekhodi angama-44,5000 abuyekeziwe wohlu lwebhizinisi lebhizinisi afinyelela kuma- $ 900, ongawathenga ngokukhokha ngesikhathi esithile kanye nesoftware elandelwayo engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Lokhu kubalulekile ukuhlinzeka ngokufanele, ukufinyelela ngokushesha, amabhizinisi amaningi ongafinyelela kuwo ukuze wena noma inkampani yakho mumake kalula. Ekugcineni, lokhu kungenza insizakalo yamakhasimende ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka, ukwenza inkampani yakho iqhubeke ikhula ngempumelelo yebhizinisi lakho.
Austria Business Ucingo Umbuzo & Impendulo